Ọdịnihu nke nkwekọrịta onwe onye site na iji Blockchain | Martech Zone
Ọdịnihu nke nkwekọrịta onwe onye site na iji Blockchain
Friday, December 1, 2017 Douglas Karr
Ọ bụrụ na nkwekọrịta nwere ike ịrụ ọrụ n'onwe ya ma ọ bụrụ na ọnọdụ ụfọdụ ezute? Na ihe omuma a, Ike nke Nkwekorita Smart na Blockchain, Etherparty na-akọwa otu nke a abụghị ọdịnihu - Nkwekọrịta Smart na-aghọ eziokwu. Nkwekorita nke oma nwere ike iwepu ikike nke ndi nkwekorita na nkwekorita site n'aka ndi na-eme mkpebi, na-enye ohere di egwu maka ndi ozo imechi ihe ndi zuru oke maka ndi ozo - n'ihe gbasara ego, ntụkwasị obi, na igbu.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ edemede miri emi na teknụzụ Blockchain na Cryptocurrency, aga m akwado Ihe ọmụma CB whitepaper.
Kedu ihe bụ teknụzụ Blockchain
Gịnị bụ Smart Contract?
Etherparty, ihe eji eme nkwekọrịta nkwekọrịta smart nke na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta nkwekọrịta dị mma na ngọngọ ọ bụla kwekọrọ, akọwa nkwekọrịta amamịghe dị ka ndị a:
Dị ka aha ahụ na-egosi, smart contracts na-arụ ọrụ site na ntụzi aka nke koodu koodu, na-enye ha ohere ịrụ ọrụ na-ewepụ mkpa maka nka mmemme mmadụ karịa ntuziaka koodu mbụ. Ọrụ nkwekọrịta na-enyere ndị ọzọ aka ịrụ ọrụ site na nkwekọrịta dijitalụ akwadoro, n'ọnọdụ ụfọdụ wepụ mkpa maka ndị etiti ma ọ bụ ndị ọka iwu. Nkwekorita Smart na-adabere na nsonaazụ, na asụsụ ha na-arụ ọrụ nhụchasị site na ntinye ntinye.
Mana smart contracts na-enye ọtụtụ ihe karịa aha ha pụtara; Akpata ọgbaghara ha karịrị ụlọ ọrụ abụọ na-achọ ịhazi nkwekọrịta. Nkwekorita amamịghe nwere arụmọrụ iji kwado ma bulie usoro kwurula nke ọma, na-ebufe data site na otu ihe gaa na nke ọzọ na-enweghị mgbagwoju anya ma ọ bụ nkwụsị nke nhazi akwụkwọ. Securedị nchekwa nke netwọkụ na-ekesa teknụzụ nke blockchain na akara zoro ezo na-emebi onwe ha, mana ọ bụ teknụzụ pụrụ iche nke nhazi data na-eme ka ọ bụrụ mgbanwe maka azụmaahịa nke taa chọrọ ndị ọzọ iji kwado azụmahịa.
Ihe omuma ihe omuma a na akowa na teknuzu, usoro, uru, uru, na ihe mgbagwoju anya nke Smart Contracts na Blockchain.
Tags: blockchainblockchain technologycb nghọtaUgboroethereumihe mgbagwoju anyagịnị bụ blockchain
Igodo isii maka Ọganihu Ndị Ahịa Na-eji Social Media